Ny valin'ny fitsaboana Tadalafil Generic for ED | PHCOKER
Fitsaboana goavambe ho an'ny Tadalafil Generic For ED
1. Tadalafil- Toy ny fanafody tsy zatra
2. Inona no atao hoe Tadalafil (171596-29-5)?
3. Tadalafil (171596-29-5) - Manao ahoana izy io?
4. Tadalafil - Ahoana no tokony ataoko raha te-haka Tadalafil aho?
5. Tadalafil-Inona no vokany eo amin'ny vatana?
6. Tadalafil- Inona avy ireo endrika fampiharana ao Tadalafil?
7. Tadalafil-Ahoana ny momba ny tsikera Tadalafil?
8. Tadalafil - Ahoana no hividianana Tadalafil amin'ny Internet?
9. Tadalafil (171596-29-5) - Manaitra
Tadalafil- Toy ny fanafody tsy zatra
Ny disfunction erectile (ED) dia lasa olan'ny fahasalamana mahazatra eo amin'ny lehilahy, indrindra ireo izay namely ny 40. Fikarohana iray vao haingana no naneho fa ny 5% ny lehilahy efa 40 taona dia mijaly amin'ny fandidiana tanteraka. Mitombo ny salanisa ho an'ny 15 ho an'ny lehilahy 70. Mba hamahana izany olana izany dia nanentana ny fanafody isan-karazany ny mpahay siansa mba hanampiana ny lehilahy hitazomana ny maha-lehilahy azy amin'ny fahaiza-miaina tsara. Tadalafil (CAS 171596-29-5) dia iray amin'ireo fanafody fitsaboana malaza indrindra amin'ny ED.
Inona no atao hoe Tadalafil (171596-29-5)?
♦ Marika: Cialis, Adcirca, sns.
♦ Ny rafitra ara-tsimika ao Tadalafil
Tadalafil dia fanafody am-bava nekena FIDA izay ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fametaveta na impotence eo amin'ny lehilahy. Miasa mitovitovy amin'ny Viagra sy Levitra amin'ny alàlan'ny fampiakarana ny fandatsahan-dra amin'ny penis izany ary vokatr'izany dia ahafahan'ny lehilahy iray mitraka. Izy io dia mety ho an'ny olon-dehibe izay manana fahasarotana amin'ny fahazoana na mihazona ny ety penile.
• Tantaram-pinoana Tadalafil
Galxo Wellcome, miaraka amin'ny Lilly ICOS, orinasa biotechnologie, no voalohany nahita sy nanamboatra Tadalafil. Na izany aza, nizara fomba tamin'ny 1996 ireo orinasa ary roa taona taty aoriana dia niditra tao amin'ny orinasa iraisam-pirenena ny ICOS Corporation sy i Eli Lilly ary namorona orinasa vaovao antsoina hoe Lilly ICOS, LLC. Ny orinasa dia nanangana indray ny zava-mahadomelina ary nanomboka nivarotra izany ho Cialis.
Taorian'ny taona vitsivitsy, dia ny Lilly ICOS, LLC. nametraka fampiharana vaovao momba ny zava-mahadomelina miaraka amin'i Tadalafil ho anarana fanolorana ary Cialis ho marika. Ny volana desambra 2003 dia fotoana manan-tantara ho an'i Tadalafil satria fotoana nankatoavin'ny fivarotana ny sakafo sy ny fanafody (FDA) tany Etazonia izany ho fanafody fitsaboana ny tsy fahampiana.
Tadalafil (171596-29-5) - Ahoana no iasany?
Ny lehilahy miaraka amin'ny ED dia manana enzyme antsoina hoe PDE5. Io angady io dia manakana ny gonosine monophosphate (cGMP), izay tena manan-danja amin'ny fanitsiana ny fananganana penisma. Ny cGMP dia manampy ny fandrenesan'ny lehilahy ny famantarana ao amin'ny faritra miafina mba hamoahana famoahana oksika. Vokatr'izany dia mihalafo ny fantson-tsakafo ao anaty tahony mitsatoka ao anaty lakana, ary miteraka fitomboan'ny rà mandriaka amin'ny sambo mba hamenoana ny rafitra lava ao amin'ny vatany. Izany dia mahatonga ny penis ho lasa sarotra sy sahirana.
Ny habetsahan'ny PDE5 sy ny tsy ampy ny cGMP ao amin'ny lehilahy iray dia mahatonga ny vatany tsy mahavita mamantatra ireo mari-pamantarana navoakan'ny fiafaran'aretiny, ka mahatonga ny fahaverezan'ny ampahany na ny fahaverezan'ny fahafaha-manamboatra penile. Ny lehilahy manana olana amin'ny fitrandrahana dia manamaivana ny rà mandriaka amin'ny penile. Koa satria mihamafy ny penisoa noho ny fitomboan'ny famatsiana, tsy afaka mahazo fananganana ny lehilahy toy izany noho ny tsy fisian'ny rà tsy ampy ao anaty penisiny. Semaglutide Effects Tahaka ny Peptide? TSIA, betsaka kokoa noho izany!
Rehefa misy olona iray manana fitambaran-tsolika dia tsy mahavita azy Tadalafil (171596-29-5) Araka ny voalaza dia mampihena ny vokatry ny PDE5 ao amin'ny rafitry ny vatany ny zava-mahadomelina ary mahatonga ny cGMP hifantoka amin'ny fomba mahazatra izany. Tahaka ny hafa Erectile dysfunction drugs, Tadalafil dia miasa amin'ny fanitarana ny ran'ny olona iray ary vokatr'izany, rehefa mihanihany ny firaisana ara-nofo, mitombo ny rà mandriaka mankany amin'ny penisiny, mihamafy ny taova, noho izany ny fananganana.
Na dia mihatra amin'ny Viagra ihany aza ny fanafody, ny Spedra sy Levitra dia maharitra maharitra hatramin'ny 36 ora. Tsy mahagaga raha antsoina hoe pilina faran'ny herinandro izany, satria fotsiny ny doka tokana amin'ny zava-mahadomelina dia mety hahatonga lehilahy iray manana ED manana fananganana ara-dalàna ary mankafy ny firaisana ara-nofo amin'ny namany mandritra ny faran'ny herinandro manontolo.
Rehefa misy olona mandray tsimokaretina 36-ora Tadalafil dia mampihena haingana ny haavon'ny PDE5 ao amin'ny vatany (eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 45 minitra) ary vokatr'izany, ny cGMP dia miverina amin'ny haavony. Na izany aza, satria ny antsasaky ny fiainana medikaly dia mihena ny heriny ao anatin'ny roa andro ary vokatr'izany dia mitombo indray ny haavon'ny PDE5 ary ny lehilahy indray no mamoy ny fepetra fanorenana indray.
Etsy ankilany, rehefa maka tsindrona isan'andro ny tsindrona Tadalafil amin'ny fitsaboana ED, ny medikaly dia manampy amin'ny fitazonana cGMP ao amin'ny vatany amin'ny salama ara-pahasalamana amin'ny fotoana rehetra raha manaraka ny fitsipiky ny medikaly ara-pinoana izy. Izany dia manampy ny lehilahy hahavita hanangona mora foana rehefa misy firaisana ara-nofo. Na izany aza, ny dose isan'andro amin'ny Tadalafil ambany dia maka 4 hatramin'ny andro 5 hanomboka hiasa. Noho izany, aza maika ny ho tonga tigra-moka rehefa mandray ny andry voalohany; Avelao hitranga ilay fotoana ary dia ho toy izany ianao raha mbola raisinao araka ny voasoratra.
Tadalafil- Ahoana no tokony ataoko raha te-handray Tadalafil aho?
Ny maha-dokotera tsy misy fanafany dia tokony ho mailo tsara ny lehilahy rehefa mikasa ny handray azy. Ambonin'izany, tokony hanao sy hitandrina zavatra samihafa izy, dieny sy aorian'izany.
Andeha isika hanomboka amin'ireo zavatra tokony hataontsika alohan'ny handraisantsika ny zava-mahadomelina.
Ataovy ireto manaraka ireto alohan'ny handraisanao an'i Tadalafil:
• Mandehana any amin'ny dokotera na pharmacista torohevitra momba ny dosie tokony ho an'ny Tadalafil anao, miaraka amin'ny fampahalalana hafa momba ny ordinatera.
• Raha toa ka tsy mahazaka fanafody vitsivitsy ianao, anisan'izany ny Tadalafil na ny zavatra entiny, dia avelao ny dokotera na ny pharmacist hahalala izany. Azonao atao ny mahazo fanazavana momba ny zavatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina avy amin'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana.
• Avelao ny dokotanao mba hahalala raha toa ka nahatonga ny dinidinika riociguat na nitrate isosorbidinina sy nitroglycerine tamin'ny lasa vao haingana na mbola eo amin'izy ireo. Azonao atao ny manamarina amin'ny dokotera na pharmacista raha toa ka mampiasa ny zava-mahadomelina (raha misy). Azonao atao ny manoro hevitra anao tsy handray Tadalafil raha hitan'ny dokotera fa mitondra nitratrana ianao satria tsy mahomby amin'ny Tadalafil.
• Tsarovy fa ny Tadalafil dia manana adiresy Adcirca na Cialis. Noho izany, tsy tokony hiaraka ianao amin'ny fotoana iray, raha tsy izany dia hanararaotra ny zava-mahadomelina ianao ary mety ho tsy mety ny vokatra. Tokony hotsaboina amin'ny iray amin'izy ireo amin'ny fotoana iray ianao.
• Maka fanafody hafa ve ianao (na mikasa ny hitondra), sa ve misy prescription na tsy famaritana, vitamina na fanampiny fanampiny? Raha eny, dia raiso amin'ny sainan'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana izany. Tena ilaina ny fampahalalana toy izany satria hanampy ny dokotera na pharmacista hametrahana ny dosage izay tena tsara indrindra ho anao, amin'ny fandinihana ny fanafody hafa na ny fanampiana ampiasainao na ny fampiasanao. Raha manana ny fampahalalana ianao, dia mety hahita fa ilaina ny manara-maso akaiky anao raha misy vokany hafa.
• Mampiasa vokatra mena ve ianao, indrindra fa ny karazan'i St. John? Raha eny, avelao ilay manam-pahaizana hahafantatra izany.
- Raha toa ka mpifoka ianao ary amin'ny fotoana iray na maromaro dia efa nisy fananganana izay nanohy nandritra ny adiny efatra mahery, mila milaza amin'ny dokotera na pharmacist anao momba izany ianao.
• Lazao amin'ny dokotera raha efa nangatsiaka ianao, nalemy dia tsy nahazatra azy, na nitera-doza, na tsy nila rano ampy, ka dia miahiahy ianao fa mety tsy sasatra kely.
• Avelao ny dokotanao mba hahalala raha toa ianao ka voan'ny aretina voan'ny aretina voan'ny aretin-tsolika eo amin'ny fiainanao na fahasalamana hafa mety hisy fiantraikany amin'ny endriky ny penisanao. Ny toe-piainana toy izany dia ny diabeta, ny lozam-pifamoivoizana na ny tsindry latsaka ambany, ny aretim-po / ny tsy fahampiana, ny olana ara-pahasalamana, ny olana momba ny sela, ny fo tsy miangatra, ny fanaintainana ny tratra, ny mioeloma maromaro, ny vavonin'ny vavony, ny aretim-po, ny aretim-po, ny aretin'ny voa, ny aretina and stroke
• Raha tia ny zava-pisotro misy alikaola ianao ary te hampiasa azy ireo rehefa mandray levitra, mila miresaka amin'ny dokotera momba izany ianao. Ho fitsaboana ny fahasalamanao, ny dokotera dia hanoro anao araka ny tokony ho izy, na hisoroka ny zava-pisotro na hitondra azy am-pahamendrehana. Raha misy divay na whisky, dia mety hotsaraina ianao fa tsy handray solika mihoatra ny dimy. Izany dia noho ny fahabangan'ny alkaola raha iray amin'ny vokatry ny Tadalafil dia mety miteraka vokatra hafa toy ny fiakaran'ny tosi-drà, fitomboan'ny taham-paharetana, halatra ary ny fahatarany.
- Raha toa ka efa notoroan'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamana ianao taloha mba tsy hanao firaisana ara-nofo noho ny antony ara-pitsaboana, dia tokony hampidirinao amin'ny dokotera izany.
• Lazao amin'ny dokotera raha mbola teo am-panaovana fanaintainana ny tratra aorian'ny fanaovana firaisana ara-nofo. Mety henjana ny fonao vokatry ny fanoloran-tenanao amin'ny fanaovana firaisana ara-nofo, indrindra raha mijaly amin'ny aretim-po ianao.
• Lazao amin'ny dokotera raha toa ka nesorina ianao na nesorina.
Tsy tokony haka Tadalafil raha misy:
• Efa nisy ny fahitana fahitana mahazatra antsoina hoe neuropathie (NAION) izay tsy misy arteritika.
• Maharary amin'ny aretim-po ianao
- Voafehy ianao na aretim-po, vao haingana, indrindra fa ny enim-bolana farany
• Mijaly ianao amin'ny tsindry ambany
♦ Tsy manana fiarovana mahery vaika
• Tsy mahazaka ny tsiranoka amin'ny tsiro Tadalafil
• Tadidio fa tsy mety ny vokatr'ilay fanafody. Na dia ny dosie 36-ora aza dia manome ny valin'ny Tadalafil tadiavina haingana raha oharina amin'ny dose isan'andro, mety hiandry ny 15 ka hatramin'ny 45 minitra mba hahatsapa ny vokatry ny zava-mahadomelina.
• Aza mandray nitrates mandritra ny ora 48 farafahakeliny alohan'ny fotoana andrasanao handray Tadalafil.
• Hahazo Tadalafil amin'ny loharano azo itokisana. Azonao atao ny miantehitra amin'ny Phcoker.com ho an'ny vokatra Cialis tena izy, anisan'izany ny Tadalafil.
Raha mandray Tadalafil
♦ Raha vao hitan'ny dokotera fa mety ny mampiasa Tadalafil ianao ary manoro anao ny doka mety amin'ny fitsaboana ED, dia misy zavatra maro tokony hataonao rehefa mandray ny fanafody. Ity ny lisitry ny dos sy ny don'ts:
• Mitandrema fa manaiky tanteraka ny dosage torolalan'ny dokotera ianao. Raiso ny fanafody raha ny torohevitra nomen'ny manam-pahaizana anao. Tokony hoentina antsasak'adiny alohan'ny fotoana efa nomaninao hanao firaisana ara-nofo ianao.
• Mihinàna ny latabatra amin'ny rano fisotro. Azonao entina miaraka amin'ny sakafo na tsy misy sakafo. Aza misotro be loatra ny alikaola rehefa mandray ny fanafody, satria mampitombo ny fahavoazanao ny fiantraikany eo amin'ny sehatra toy ny fandrobana rehefa mitsangana ianao.
• Aza misotro ny jiron'ny grapefruit, misakafo grapefruit na mampiasa vokatra grapefoka raha ianao mandray Tadalafil satria ny voka-tsoan'ny grape dia mety hanelingelina ny fahombiazan'ny fanafody.
• Tokony tsy hisotro toaka ihany koa ianao rehefa mampiasa ny fanafody ED. Ny fanehoan-kevitra momba ny zava-mahadomelina sy ny alikaola dia mety hahatonga anao hiaina fiharatsiana hafa.
• Tokony haka ny zava-mahadomelina arakaraka ny habetsahan'ny soso-kevitra omen'ny dokotera ianao; tsy mihoatra, tsy latsaky ny.
• Aza maka fanafody mandritra ny fotoana lava kokoa noho izay voasoratra.
• Azonao atao ny mandray Tadalafil miaraka na tsy misy sakafo
• Mampihorohoro ny tablette Tadalafil amin'ny rano mangatsiaka; Aza simba na misaraka ny takelaka.
• Tokony handray Tadalafil alohan'ny fanaovana firaisana ary tsy mihoatra ny indray mandeha isan'andro.
• Tsy maintsy ilaina amin'ny fandaharam-potoana ny fanafody. Noho izany, raiso fotsiny izany araka ny voalazan'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana.
- Raha sendra tsy ampy dosie ianao dia aza manalalaka tsiranoka fanampiny. Raha tsy diso ianao, aleo mandeha tahaka izao fotsiny izany ary tohizo araka ny voasoratra.
Taorian'ny nahazoan'i Tadalafil
• Ataovy azo antoka fa te hampisy firaisana ianao raha te-hanangona sy hankafy ny firaisana satria ny zava-mahadomelina ihany no mahomby rehefa mampirisika anao hanao firaisana ara-nofo.
♦ Raha sendra fandidiana ianao, na dia ny fitsaboana tena goavana toy ny toeram-pitsaboana aza dia efa nahazo an'i Tadalafil; Lazao amin'ny dokotera na mpandidy anao izany mialoha ny fandidiana.
Raha sendra vao haingana ny Tadalafil na mbola eo am-panaovana azy ary ilainao ny fitsaboana vonjimaika, dia avelao ny mpitsabo anao hahafantatra izany koa. Ny Tadalafil dia mamaly amin'ny fanafody am-po, ary noho izany, rehefa manambara fampahalalana toy izany ho an'ny mpitsabo manokana momba ny fahasalamanao, dia ho afaka hametraka ny fihetsika tsara indrindra izy ireo, amin'ny fandinihana ny fahombiazan'ny Tadalafil ao amin'ny vatanao. Noho izany, ny dokotera dia ho liana amin'ny fahafantaranao rehefa naharitra ny fanafody.
• Ataovy azo antoka fa mitazona ny fanafody amin'ny habaka fandriana ianao, amin'ny toerana mangatsiaka sy maina; lavitra ny hafanana sy ny fahamendrehana.
Tadalafil - Inona no vokany miampy?
Na dia mahomby tsara amin'ny fitsaboana EDAD aza ny Tadalafil, dia mety hisy vokany tsy ampoizina izany. Na dia tsy mahatsapa ny vokany rehetra aza ny lehilahy iray, dia tokony hikaroka ny fitsaboana izy raha sendra mahita ny sasany amin'izy ireo.
▲ Ny voka-dratsiny dia tsy maintsy ilàna ny dokotera
King ny fanafody satria ny sasany amin'izy ireo dia mety ho faty raha tsy mandeha tsara izy ireo.
A: Ny voka-dratsin'ny Common
Amin'ity tranga ity, ny vokatra iraisana iraisana dia:
Ny fanaintainan'ny tanana
Ny fanaintainan'ny leg
Mafy ny vavony
Stuffy nose / nasal fifindrana
Ny fanaintainan'ny tratra
Tratran'ny tsy fahampiana
Ireto ny fo mamitaka
Fahalemena na fahamaivana rehefa miala haingana avy eo toerana mipetraka / mipetraka
Feno fahavinirana na fahalemena
Hehy, tony, na fihetseham-po
Ny molotra, ny lela na ny tenda
Ringing ao amin'ny sofinao
B: Ny vokatra hafa
(1) Amin'ny teny mahery
Na dia tsy dia fahita firy ny tsimok'aretina Tadalafil manaraka, dia manana fanehoan-kevitra mafy izy ireo raha mitranga izany.
Faharetan'ny pensio na maharitra
Fihetseham-panafody tsy mahazatra
Ny tahirin-tsakanana voasakana na mihidy
Mitombo ny tosidra rehefa mitsangana
Hisy ny olana
Ny aretina maso vokatry ny olana ara-drà
Fijanonan'ny fo tampoka
Ny fo mamely na mamely
Ny aretin'ny voa sy ny fihenan'ny voa
Fahitana fahitana tampoka
Ny tarehy mirenireny
Ny fihenan'ny hoditra sy ny hoditra
(2) Fanehoan-kevitra mavesatra
Ireto manaraka ireto dia vokatry ny tsimok'aretina Tadalafil (171596-29-5) nefa izy ireo dia manana fitenenana kely kokoa raha ampitahaina amin'ny voatanisa teo aloha.
Fihetseham-panafody ao amin'ny vatan'ny hodi-maso
Fihetseham-po mirehitra ao amin'ny vavony
Ny olana momba ny torimaso
Nahita mason'andro tsy hita maso
Ny aretin-kibo tsy ara-dalàna
Fotoana fohy amin'ny faharetan'ny fahatsiarovan-tena
Tena be loatra
Maivana be loatra
Fangom-bary eo amin'ny tongotra, tanana, tongotra na fitaovam-piadiana
Be loatra ny rà eo amin'ny fitaratra
Fandrindrana tsy tapaka
Ny maso malahelo
Ity lisitra etsy ambony ity dia tsy ahitana ny fiantraikan'ny zava-mahadomelina. Noho izany, voatendry ianao mba hahazo fampahalalana feno momba ny mety ho fiantraikany amin'ny dokotera. Raha sendra misy vokany hafa iray tsy hita eto, dia azonao atao ny mitatitra izany amin'ny FDA ao amin'ny 1-800-FDA-1088.
▲ Ny voka-dratsiny tsy mila ny dokotera
Ny vokatry ny tsimokaretina Tadalafila dia tsy mila mitaky fitsaboana handehanana. Ny sasany dia mandalo amin'ny tenany rehefa ampiasaina amin'ny fanafody ny vatanao. Ankoatra izany, ny mpitsabo anao dia afaka manoro anao ny fomba hisorohana na hampihenana ny vokatra toy izany. Na izany aza dia mbola afaka manara-maso amin'ny manam-pahaizana momba ny fahasalamanao ianao raha toa ka maharitra na manelingelina anao. Ny sasany amin'izy ireny dia mahazatra kokoa noho ny hafa. Andeha isika hanomboka amin'ny mahazatra kokoa:
A: Ny fiantraikany eo amin'ny selam-piarahamonina
Mangatsiaka na voaniho
Ny tsy fahampian'ny alahelo
B: Ny voka-dratsin'ny sela mahasalama kokoa
Ireo vokatry ny tsimokaretina ao Tadalafil dia mandeha irery tsy misy fitsabatsabaka fa tsy dia mahazatra.
Miontana, "tsipika sy fanjaitra", mihodina, mikiky sy mikororoka fihetseham-po
Hanaintaina, mirehitra na maina
Mangotsoka na tenda malazo
Reraka be loatra
Herisetra sy aretina
Ny sandry, ny sandry ary / na ny fanaintainan'ny ratra
Tenda mampalahelo na mandoro
Mitebiteby, mibontsina na mivembena, mason-koditra na hodi-maso ny hodi-tady
Ny fitaintainana na ny fahantrana tsy mahazatra
Fananganana fanenjehana ny penis
Puffy na tebiteby
Ny fanaintainan'ny abdomen ambony na ny vavony
Tadalafil- Inona avy ireo endrika fampiharana ao Tadalafil?
Tadalafil dia tonga amin'ny endriky ny tablette, na flux na. Na inona na inona fomba izay ahafahanao mandray ilay fanafody, dia matokia fa mahomby toy ny fanafody amin'ny endrika roa hafa. Ny Tadalafil Liquid dia mitovy amin'ny tabilao na takelaka Tadalafil raha mbola nividy ny fanafody avy amin'ny loharano azo itokisana. Na dia mety hisy fahasamihafana aza, dia tokony ho tsy misy dikany izany.
♦ Tadilafila na tableta
Araka ny voalaza tetsy aloha dia tonga toy ny takelaka, tabilao misy ranon-tsavony na Tadilafil. Ny tabilao Tadalafila na pilina dia mavo mareva-doko, mifamatotra amin'ny sarimihetsika ary miloko manga. Izy ireo dia amidy amin'ny 2.5, 5mg, 10mg ary 20mg doses. Ny fanontaniana 9 dia manontany ny tenanao alohan'ny handraisanao an'i Avanafil
Ny takelaka dia tonga amin'ny takelaka 5, 10, 15, 30 ary 90 takelaka. Azonao atao ihany koa ny mahazo ny fanafody amin'ny pocket 4, 8, 12, 16 na 28.
Ny tabilao Tadalafil amin'ny fampiasana isan'andro dia tonga amin'ny dosage 2.5 mg sy 5 mg raha ampiasaina ny dosage 10mg raha vao manomboka hanao firaisana ny lehilahy; farafahakeliny 30 minitra talohan'ny nanaovany firaisana ara-nofo. Raha mandinika ny fahombiazan'ny rongony amin'ny lehilahy iray sy ny fandeferany amin'ny fanafody, ny dokotera dia afaka mandefa ny fampiasana dosage ilaina amin'ny fampitomboana ny 20 mg na ny fihenam-bidy amin'ny 5 mg. Ny 5mg rehefa tsy misy ilana azy dia mety tsara ho an'ny lehilahy manana ED.
Ny dose Tadalafil isan'andro dia matetika no 2.5 mg ary tokony horaisina toy ny amin'ny fotoana voafaritra isan'andro. Na izany aza, miankina amin'ny fihenam-bidy sy ny fandeferana, mety hampitomboina ny dosage amin'ny 5 mg.
▲ Misy tabilao misy tabilao na tabilao ve ao Tadalafil?
Ao amin'ireo endrika isan-karazany ao amin'ny Tadalafil, ny fanafody amin'ny tablette na ny fanafody piline dia mety ho ny tablette no manodidina ny fotoana lava indrindra raha oharina amin'ny Tadalafil, suspensions ary gels. Fantatry ny mpametaveta fa ny tabilaon'ny zava-mahadomelina no malaza indrindra ary noho izany dia manararaotra izany izy ireo mba hanomezana fanafody famokarana plastika. Noho izany, tokony mila mitandrina bebe kokoa ianao rehefa mividy Tadalafil, indrindra ireo takelaka. Tsara kokoa, alaivo avy amin'ny loharano malaza izy ireo, indrindra fa avy amin'ny Phcoker.com, anisan'ireo mpamatsy sy mpamorona azo itokisana. Na dia izany aza, tsy midika izany fa tsy tokony hanana maso manintona ianao rehefa mividy Tadalafil suspensions and gels.
♦ Tadalafil (171596-29-5) ranon-javatra
Tadalafila ny tavy dia miloko fotsy ary miloko toy ny takelaka, tokony ho voatahiry ao amin'ny toerana mafana sy maina, lavitra ny hafanana, ny fahamendrehana ary koa ny fivoahana mivantana amin'ny hazavana. Ny lehilahy izay mahatsapa ny fahasarotana ny tablety mangalatra dia mahita mora kokoa ny mampiasa Tadalafil raha toa ka endrika mangarangarana. Ankoatra izany, ny olona izay mora vaky amin'ny toe-pahasalamana mahazatra toy ny dyspepsia dia maniry ny tavy Tadalafil satria mora simba sy azo tsaboina amin'ny vatany. Ankoatra izany, ny fanafody amin'ny endrika mangirana dia manomboka aloha kokoa raha ampitahaina amin'ny takelaka.
Raha ny marina, tsy mampaninona raha toa ka efa nampiasa takelaka Tadalafil na Tadalafil ny takelaka ianao, raha mbola nividy izany avy amin'ny loharano azo itokisana ianao, tokony ho matoky tsara an'io fananganana tsara io fa mila mahatsikaritra kokoa. Noho izany, tsy tokony handany fotoana be ianao hitady karazana pilina (raha tsy misy olana na fitsaboana). Raha mahazo ny takelaka, na ny rano ianao, dia tsara ny mandeha.
Amin'ny fiafaran'ny andro, tsy mampaninona raha mampiasa fanafody Tadalafil na Cialis pills ianao; dia mbola mihoatra noho ny mety hahatratrarana izany fananganana tsara izany no ilainao. Noho izany, aza mandany fotoana be loatra mitady ny safidy tsaratsara kokoa ho an'ireo roa ireo - izy ireo dia ampy tsara mba hahatonga anao sy ny namanao hitsiky.
Ny fanafody famonoana ny Tadalafil dia navoaka an-tsena taorian'ny takelaka. Noho izany, tsy dia malaza loatra izy ireo raha ampitahaina amin'ny tablette ary noho izany, ny olona sasany dia mety hanontany ny fahombiazan'izy ireo saingy ny marina dia mitovy vokatra izy ireo. Ny fanafody rehetra ampiasaina amin'ny fanafody dia mampiasa ny zavatra iray tena mavesatra ary noho izany dia azo itokisana ihany koa izy ireo. Na izany aza dia tadidio fa raha mividy Tadalafil amin'ny mpivarotra azo itokisana ianao, dia azo antoka fa mampiasa fanafody azo antoka sy azo antoka ianao.
▲ Ahoana ny fomba ampiasana ny Tadalafil
Ny tselatra Tadalafil dia mivoaka amin'ny rivotra midadasika sy mora manokatra tavoahangy.
Tokony hampihorohoro ny tavoahangy alohan'ny fampiasana ianao mba hahazoana antoka fa hifantoka be ny vahaolana.
Azonao ampiasaina ny eyedropper mba hampisehoana ny dosa tsara amin'ny fanafody
Apetraho amin'ny lelanao ny fanafody ary hitelina. Tsy dia tsara loatra ny zava-mahadomelina ary toy izany koa, amin'ny olona tsy tia fanandramana fanafody sy ny tsy mahafinaritra azy ireo aorian'izay.
Ny doka 5ml an'ny Tadalafil dia ampy mba hanampiana anao ho tonga haingana dia haingana. Na izany aza, tadidio fa niteny izahay fa tokony hitondra ny zava-mahadomelina araka ny torolalan'ny dokotera.
Raha raisinao ny rongony amin'ny vavony iray tsy misy ilana azy, dia mety hahazoana fananganana ao anatin'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra haka azy io. Na izany aza, ianao dia hahazo ny vokatra tsara indrindra amin'ny fanafody aorian'ny ora iray.
Noho izany, aza maika ny haka fanafody hafa raha tsy mahita valiny ianao ao anatin'ny 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Mialà sasatra fotsiny ary miandry ny 60 ka hatramin'ny 90 minitra mba hahitana raha toa ianao ka nahatsapa ny vokatry ny zava-mahadomelina.
Raha toa ka tsy tonga ny valiny na dia miandry 60 na minitra 90 aza, miangavy ny mpitsabo manam-pahaizana momba ny fahasalamana momba ny tokony hatao manaraka. Azo inoana fa hotsaraina ianao hampidirina dosage fanampiny 1ml amin'ny fanafody.
Ny fahasamihafana goavana eo amin'ny takelaka Tadalafil sy Tadalafil dia ny fanaingoana ny teo aloha amin'ny rindrina ny taratasy mivalona mahasalama ary noho izany dia somary mafampana sy malefaka eo amin'ny rafi-pandaminana. Rehefa tonga eo amin'ny tablette izy ireo, dia tsy maintsy ravina amin'ny endriny iray izay ahafahan'izy ireo mandray ny taratasy mivalona amin'ny alikaola alohan'ny fitsaboana ary noho izany, dia miharitra ela kokoa ny vokatr'izy ireo.
Izany no antony mahatonga ireo olona mety ho voan'ny aretim-pivalanana toy ny dyspepsia sy ny reflux gastroesophageal ny tavy Tadalafil amin'ny takelaka. Ny olana dia tsy dia mahazatra loatra rehefa mandray ny fanolorana rano ny olona iray ary ampitahaina amin'ny fotoana iray ny fanafody iray amin'ny tablette.
Tadalafil no fitaovana mason'ny Tadalafil. Ny fototeny ny fotsy dia fotsy ary ampiasaina matetika amin'ny famokarana takelaka Tadalafil. Azonao atao ny mahazo ny tena Tadalafil avy amin'ny mpamatsy avo lenta toy ny Phcoker.com.
Ankoatra ny fanaovana takelaka sy tabilao Tadalafil, dia azo ampiasaina ihany koa ny Tadalafil mba hanaovana kafe sy firaisana ara-nofo.
♦ Tadalafil ho an'ny siramamy
Ireo zava-manan'aina ara-pananahana dia tena manan-danja eo amin'ny lehilahy manana olana ara-pananahana, indrindra ireo izay manana fahantrana ara-pananahana ary ireo fahasahiranana amin'ny fananganana ny penalama rehefa manatsara ny faniriany sy ny fahafahany manao firaisana. Tadalafil dia fanafody mahazatra ao anaty siramamy. Mahafinaritra ny siramamy ary toy izany koa, mampirisika ny olona iray handray ny fanafody mampivelatra ny fanaovana firaisana ara-nofo.
♦ Tadalafil ho an'ny kafe
Efa nandre momba ny firaisana ara-kafe? Eny, ireny karazana zava-pisotro misy entana ireny dia afaka mampitombo ny libido. Misy karazana Cialis azo ampiasaina hanamboarana kafe ara-nofo, arakaraka ny tanjaky ny faniriana hanao firaisana ara-nofo.
Ankoatra ny Tadalafil, ny kafe eo amin'ny firaisana dia misy zavatra hafa toy ny voankazo voankazo, maca, cinnamon, tantely ary Cacao. Noho izany, ny tsindrin-tsakafo dia misy tsiranoka kely matevina ary ny fitiavany dia manintona ny tsironao. Amin'ny maha-toy izany, dia tsy hahatsiaro ho toy ny hoe mitondra zava-mahadomelina akory ianao.
Ny habetsahan'ny Tadalafil amin'ny kafe eo amin'ny sehatry ny firaisana dia voatarika amin'ny herin'ny tanjaky ny vokatry ny fanafody amin'ny vatan'ny lehilahy rehefa mandray ny fisotroana.
♦ Ny endrika hafa
Tadalafil koa dia tonga toy ny jelly. Ny tsiranoka Tadalafil dia medikaly am-bava ED ary tokony avelao ny hamotsotra ao am-bavanao alohan'ny hitelina azy. Mora ny mitelina ary noho izany, mety ho an'ny olona miaina ny fahasahiranana sy ny zokiolona.
Tadalafil-Ahoana ny momba ny tsikera Tadalafil?
Ny ankamaroan'ny lehilahy izay mampiasa an'i Tadalafil dia faly noho ny valiny. Avelao ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra azonay avy amin'ny mpividy momba ny zava-mahadomelina.
Thomson avy any Eraopa: "Nilaza izy fa mampiasa ny Tadalafil izy nandritra ny dimy volana ary faly izy nahita izany. "Izaho no 64 taona ary sambatra satria, na dia eo aza ny taona 15 izay miady amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny sipako, dia afaka mahatsapa olona maro aho hatramin'ny fotoana nahitako io zava-mahadomelina io. Mahazo fananganana tahaka ny nataoko tany am-piandohan'ny 20 aho, "hoy izy. Manohy manoro hevitra amin'ny lehilahy hafa amin'ny resaka fananganana toeram-panadinana izy mba hanandrana an'i Tadalafil ary azony antoka fa hahita izany koa izy ireo. "
Cheng avy any Shina: "Nilaza izy fa nandao azy nandritra ny volan-tantely ny vadiny vao haingana, satria tsy afaka nanafaka azy teo am-pandriana. Nizara ny traikefa tamin'ny namana iray izay nanoro hevitra azy hampiasa ny Tadalafil. "Taorian'ny nandraisanay an'i Tadalafil, dia nanana fotoana tsara indrindra izahay ary ny fiheveran'ny vadiko ahy dia niova. Na dia izany aza, mbola tokony hampahafantariko azy fa mampiasa fanafody fampivoarana ny firaisana ara-nofo aho fa hamela azy fantany amin'ny fotoana. Tsy afa-misaotra ny olona izay tonga miaraka amin'ity fanafody ity aho, "hoy izy."
Lam avy any Shina: "Nilaza izy fa ny zava-mahadomelina rehetra efa nampiasainy hatramin'izay, Tadalafil no tsara indrindra. "Ny vokatra dia eo ho eo ary farany ho an'ny fotoana lava indrindra raha oharina amin'ny marika hafa," hoy izy nanoratra. "
Khatri avy any India: "Tadalafil dia mahomby sy mendrika ny vola madinika amin'ny vidiny," hoy izy. Nampiany fa na dia tamin'ny fotoana voalohany aza dia nahazatra ny tazo sy ny aretin-tarehy izy taorian'ny fampiasana azy, amin'izao fotoana izao dia tsy mahatsapa ny fiantraikany amin'ny fihinanana fanafody izy amin'izao fotoana izao. "
Tong avy any Shina: "Mpivarotra sy mpivarotra an'i Tadalafil aho ary avy amin'ny traikefa, efa nanana ilay zava-mahadomelina aho, azoko antoka ny milaza fa miasa izy," hoy i Tong. "Manoro azy mafy aho amin'ny olon-dehibe rehetra manana fahasalamanana," hoy ihany izy. "
Rodrigues avy any Etazonia: "Nilaza izy fa nividy Tadalafil an-tserasera, avy amin'ny Phcoker.com mba hahitana mazava, ary hatramin'izao."
Zoeng avy any Shina: "Tadalafil dia nanampy ahy fotoana be mba hamerenana indray ny fitiavan-tenako ho lehilahy. Ampiasako izany indraindray, indrindra amin'ny faran'ny herinandro rehefa manantena ny hametraka olona iray aho ary tsy nandiso fanantenana ahy velively. Maniry fotsiny aho raha afaka mahazo izany avy amin'ny famokarana famatsiam-bola any an-toerana. Manantena aho fa hanao izay ilaina ireo mpamatsy. "
George: "Nilaza izy fa mampiasa azy Tadalafil izy sy ny namany ary samy tia azy ireo. Tena manoro hevitra azy amin'ny lehilahy hafa manana olana amin'ny fananganana penile. "
Isaac: "Nilaza i Isaac fa mampiasa ny Tadalafil izy ary gaga amin'ny vokatra azony. "Tiako ho fantatro aloha izany," hoy izy nanohy niteny. "
Tadalafil - Ahoana no buy Tadalafil online?
Tsy voatery hivezivezy ianao hitady toerana iray azonao hividianana Tadalafil. Azonao atao ny mividy ny fanafody avy amin'ny Phcoker.com amin'ny fampiononana amin'ny PC na smartphone.
Ireto ny dingana arahina amin'ny fividianana an-tserasera:
• Mandehana any amin'ny tranonkala Phcoker.com
• Search "Tadalafil"
• Fenoy ary andefaso ilay taratasy fangatahana amin'ny fividianana
• Azo atao ny mangataka anao hameno ny fanontaniana momba ny aretina fohy; Fenoy izany ary asio. Ny manam-pahaizana manokana dia hamerina handinika ary mety hankatoavina ny baikonao.
• Raha vao ankatoavina ny baikonao, dia handoa ny vokatra ianao ary miandry ny Phcoker.com hanolotra izany aminao.
(1)Ny vidin'ny Tadalafil eny an-tsena
Tadalafil dia amidy amin'ny vidiny isan-karazany amin'ny mpivarotra samihafa. Ireto misy sombin-tsolika amin'ny vidin'ny Tadalafil Canada toy ny tamin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity (Novambra 2018).
Isan'ny takelaka isaky ny fonosana Vidin'ny takelaka Market Price range
Antenaina fa ny latabatra dia manome anao ny fijerin'ny vidin'ny Tadalafil.
(2)Tadalafil mpamatsy/ mpanamboatra avy amin'ny firenena samihafa
Ny Xuchang Shangke Chemical Co., Ltd, fantatra ihany koa amin'ny hoe Phcoker, dia orinasa haingam-pifandraisana haingam-pandeha ao Shina izay manasokajy ny famokarana dipoavatra mahazatra sy ny vokatra izay ahitana ny Tadalafil. Ny orinasa dia mametraka top-creams ao amin'ny indostria pharmaceutique sy ny fitaovam-pambolena hafa ankoatra ny fampiasana laboratoara avo lenta ho an'ny fanaraha-maso tsara ny famokarana. Ny Phcoker.com dia alefan'ny mpanjifa avy any Shina, Amerika Avaratra, Eoropa ary Inde izay mila Tadalafil tena izy. Ao no ahazoanao ny vidin'ny Tadalafil tsara indrindra.
Misy orinasa hafa izay manome an'i Tadalafil ho an'ny faritra samihafa eran-tany. Indro ny latabatra mampiseho ireo mpamokatra sy mpamatsy hafa ary ireo firenena izay iorenany:
Tadalafil (171596-29-5) -famintinana
Ny lehilahy, indrindra ireo izay nahatratra ny taona 60 dia mety amin'ny ED. Soa ihany, taorian'ny fanafahana an'i Tadalafil; Ankehitriny dia afaka mankafy ny fanaovana firaisana ara-nofo ny lehilahy tsirairay na inona na inona taonany, noho ny vokatry ny fanafody. Na izany aza, tokony mitady toro-hevitra amin'ny mpitsabo manam-pahaizana manokana ianao raha te hampiasa ity fanafody ity mba hisorohana ny mety ho fiantraikany amin'ny voka-dratsiny.
Na dia manaraka ny torohevitry ny dokotera aza ny lehilahy iray izay mampiasa Tadalafil dia afaka mahatsapa ny vokatra iray na maromaro, ny sasany amin'izy ireo dia mila ny fikarakarana ara-pahasalamana raha ny hafa kosa mety hanjavona fotsiny amin'ny fotoana manokana. Ny Fasoracetam nootropic malaza indrindra: inona no omeny antsika?
Tadalafil dia tonga toy ny takelaka, pilina, ranom-panafody, siramamy sy kafe ary amin'ny endrika jelly. Ny takelaka Tadalafil, pilina sy ranon-tsakafona dia mahomby ihany koa satria izy ireo dia manana dipoavatra mitovy. Raha ny momba ny kafe sy ny soka-bidy dia miankina amin'ny habetsaky ny fanafody ampiasaina amin'ny vokatra ny vokatra azo avy amin'ny zava-mahadomelina.
Raha te hahafantatra ianao fa marina ny Tadalafil izay ampiasainao dia mividy azy avy amin'ny mpamatsy Tadalafil iray na Tadalafil mpamatsy toy ny Phcoker.com. Tadalafil ny mandeha amin'ny zava-mahadomelina ho anao ny fitsaboana ED dia mila lehilahy.
1.National Foibe momba ny fampahalalana momba ny biôsechnologie, Etazonia. Tranombokim-pirenena momba ny fitsaboana, Tadalafil, fizarana Pubchem 1-10.
Levitra and cialis (Tadalafil), Viagra (Sildenafil), and Other Drugs Cheap and Safely Online, Published, 2 Dec 13, page, Cialis (Tadalafil): Use, Dosage, Side Effects Information 2017-5
3.James Lee Anderson, Cialis, Tadalafil: Ny fitsaboana Erectile Dysfunction, Symptoms of Hyperplasia Prostatic Prostatic, and Pulmonary Hypertension Pulmonary, CreateSpace Independent Publishing Platform, 26 Mar 2015, page 5-47.
Adihevitra momba ny lohahevitra:
1. Ny Safe Tadalafil? 2. Ahoana no hanatsarako ny fampidirako?
3. ary misotro amin'ny Cialis aho? 4. Ahoana no hanatsarana ny vokatra tadalafil?
5. Inona ny pilina tsara indrindra ho an'ny dysfunction? 6. Hafiriana no azonao raisina tadalafil?
2018-11-18 ao amin'ny 9: 20 am
I buy1 ampahefatry ny vovoka levitra ho toy ny vovon'aretina tadalafifl, ny tadalafil ny fahadiovana volo dia tsara,
Nahazo faharetana maro aho noho ny kalitao avo lenta.
Misaotra ny tadalafil, ny fiainam-panambadiana miverina amin'ny ara-dalàna, ny tadalafil poeta dia miasa tsara amiko.
You gay sell tadalafil powder please save my marriage, thank you so much.
2018-11-19 ao amin'ny 12: 11 am
Ny ankamaroan'ny loharanom-pahitalavitra dia milaza fa ny vatana dia tsy manangana fanoherana ny tadalafil aorian'ny fampiasana maharitra, fa ny mpampiasa maro dia miteny fa ny vokany dia hihena rehefa avy nalain'ny tadalafil mandritra ny fotoana fohy. Mihevitra izy ireo fa ny tadalafil dia haharitra ela. Mety tsy hanova ny voka-dratsiny ao amin'ny vatanao ilay zava-mahadomelina, ary tsy hilefitra amin'ny fanafody na fanoherana ianao. Fa ny vokatra ara-psikolojika toy ny rehefa maka ny zava-mahadomelina, izay alehanao ny zava-mahadomelina, ny toe-tsaina iainanao momba izany sns dia azo atao rehefa mampiasa tadalafil.
Miara-mivarotra ity mpanamboatra tadalafil ity izahay, ary ataovy ny tadalafil ny tadalafil, ary mivarotra any Kanada, nahazo fanehoan-kevitra lehibe izahay.